အင်္ဂ​လိပ်လိုြေ​ပာေ​န​လို့​​ထူးြ​ခား​လို့​​ထင်လား။ | White Boy Learning Burmese
October 4, 2014 by Win Hein	18 Comments
18 thoughts on “အင်္ဂ​လိပ်လိုြေ​ပာေ​န​လို့​​ထူးြ​ခား​လို့​​ထင်လား။”
*ပထမအချက်မမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒုတိယအချက်ပဲကျန်တော့တယ် ။ သူကြွားချင်လို့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးတယ်လို့ပဲယူဆရမှာပဲ ။
*ထပ်ရေးဖို့ အားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ဒါပဲနော် ။
*မှားလား / မှန်လား ၊ ကျွန်တော့်ဆိုလိုရင်းကိုရော နားလည်ကြပါရဲ့လား ဆိုတာမှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ကြပါဦး ။
ဝင်းဟိန်း စာရေးတာထိထိမိမိရှိတယ် ။ နည်းနည်းထောင့်နေတဲ့ ဝါကျတချို့ကိုပိုပြေပြစ်သွားအောင် ပြန်ရေးပေးကြည့်တဲ့သဘောပါပဲ ။ စာများများရေးပါ ။ ပိုပြီးပြေပြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာကလေးတချို့တောင် ဝင်းဟိန်းလောက် အရေးအသားမပြေချောကြတော့ဘူး ။
Here is my suggestions for translation.
စိရကာလ ဘာဝနာ (Sirakarla barvana) =အချိန်ကြာမြင့် စွာအလုပ်လုပ်ခြင်း။ (Devotion, long term commitment)
နိရန္တရ ဘာဝနာ (Nirantara barvana) = အကြားအလပ်မရှိ အလုပ်ခြင်း။ (Persistence)
နိရဝ သေသ ဘာဝနာ (Ni rawa barvana)= အကြွင်းအကျန်မရှိ အလုပ်လုပ်ခြင်း။ (Detailing, going into detail)
သက္ကစ္စ ဘာဝနာ (Thekkicca barvana)= ရိုရိုသေသေ အလုပ်လုပ်ခြင်း။ (Paying attention to)
October 5, 2014 at 05:37
Sorry. Ni rawa thaytha Barvana
ခင်ဗျားလို ဗမာစာဖြောင့်ဖြောင့်မရေးတတ်တဲ့ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေအများကြီးပဲဗျ။ အရေးအသားကို အင်မတန်နှစ်သက်ပါတယ်။ ဆီးယူအက်သည်တော့ပ် 😛 😛
မြန်မာတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ အရေးအရော အဖတ်ရော ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေး နိုင်တာကို လေးစားတယ် ဆက်ပီး ကြိုးစားပါ အောင်မြင်မှာသေချာတယ်
ကိုယ်ပဲ နားလည်တာ မှားနေလား မသိဘူး။ ဒီနေရာမှာ train (လေ့ကျင့်) ပေးတာကို ပြောချင်တာ ထင်တယ်။
(Sorry if this isarepost. I’m having trouble with posting comments via the mobile phone.)
​အေး သူများ​တွေ ကျွန်​​တော့်​ကို ​ပြောပြီးပြီ။ မူရင်းပို့စ်​ကို မ​ပြောင်းချင်​လို့ အဲအမှားရှိ​သေးတယ်​။
develop ဖြစ်ဖို့ ထရိန်းလုပ်ပေးတယ်ဆိုရာမှာ Train (လေ့ကျင့်ပေးသည်) ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ စာရေးဆရာ ကြီးကျယ်တာတော့ အမှန်ပါပဲ 😀
October 9, 2014 at 07:37
ကိုယ့်မောင်လေးဆိုရင်လည်း ဘိုလိုညှပ်ပြောတတ်တယ်။ သူက မြန်မာလို စကားလုံးရှာမရလို့ပဲလား။ ရှာရမှာ ပျင်းလို့လား မသိဘူး။ ညှပ်ညှပ်ပြောနေတာ နားထောင်ရတာ နားကြားပြင်းကပ်တယ် 🙂
ဒါတို့မှမဟုတ်​ရင်​​တော့ သူသ​ဘောကျလို့ ဘိုလိုညှပ်​​ပြောတယ်​ 😛
If you don’t like him,just go and talk to him.
I like blogs better. He can read this and respond in the comments if he likes. Thanks for reading.
The same Lin Thike Nyunt in this?
Shame such people by and large can’t really string togetheraproper English sentence. This “educated middle class” penchant foraliberal sprinkling of English words also reflects on their own Burmese language skills but the irony is lost on them. One thing I admire about Daw Suu is that she will not asarule use English words when she addresses the public. Sadly the print media also no longer bother to translate or spell out foreign names in Burmese but simply insert chunks of English (it used to be in parenthesis if at all there) as if we were all literate in English! A national disgrace and completely unacceptable. I doff my hat to you.
ကျနော်(ကျွန်တော်)စာအုပ်တစ်အုပ်ပုို့ပေးချင်ပါတယ်… ကျနော့်(ကျွန်တော်)ကုိုဆက်သွယ်ပါ…https://www.facebook.com/profile.php?id=1706906155…ကျနော် (ကျွန်တော်)ကုိုဟန် ပါ..
အရေးအသား ကောင်းပါတယ်။ ပြောချင်တာကို မြင်အောင်ရေးတတ်တယ်။ စာရေးဆရာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အားပေးနေပါတယ်။
အင်္ဂ​လိပ်လိုြေ​ပာေ​န​လို့​​ထူးြ​ခား”တယ် “​လို့​​ထင်လား။ “တယ်” လးထည့်လိုက်ရင် ဖတ်ရပိုအဆင်ပြေပါတယ်၊
ပါဋ္ဌိလိုပါသိတယ်နော် ကိုဝင်းဟိန်းက။ တကယ်လေးစားတယ်။
November 25, 2014 at 01:51